के पृथ्वीभन्दा बाहिर अन्य ग्रहहरुमा पनि जीवन छ ? – Dullu Khabar
के पृथ्वीभन्दा बाहिर अन्य ग्रहहरुमा पनि जीवन छ ?
२२ कार्तिक २०७७, शनिबार २३:५४
एजेन्सी । सयौं वर्षदेखि मानिसहरुको मस्तिष्कलाई खल्बलाउँदै आएको एउटा जब्बर प्रश्न हो– के जीवन पृथ्वीमा मात्रै सम्भव हो र ? के पृथ्वीभन्दा बाहिरका अनन्त ब्रम्हाण्डमा जीवन छैन र ?
वैज्ञानिक हिसाबले यो कुरा उत्साहजनक भइहाले पनि व्यवहारमा चाहिँ उत्साहित भइहाल्नुपर्ने कारण छैन । जीवनका सम्भावना बोकेका ती २४ वटै सम्भाव्य ग्रहहरु पृथ्वीबाट १०० प्रकाश वर्ष टाढा छन् भने केही त त्यसभन्दा पनि अझै टाढा र हालका शक्तिशाली दूरवीनहरुले पनि अध्ययन गर्न कठिन हुने दूरीमा छन् । उदाहरणको लागि, केपरल–६९सी नाम दिइएको ग्रह २ हजार प्रकाश वर्ष टाढा छ । यो भनेको अन्तरिक्ष वैज्ञानिकहरुले त्यहाँ जीवनको सम्भावना छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न अहिलेको विज्ञानको सीमामा असम्भव जस्तै छ ।स्रोत : लाइभसाइन्स